Petrus Romanus, 15 Ogosto 2021 | Manuel Silveira
← Petrus Romanus, 2021 අගෝස්තු 15
Petrus Romanus, 15 Ogosto 2021
MARWADEENA : “Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. ”
WILLIAM : Gadaasheeda waxaa kumanyaal kun kumanyaal qof madaxana ka sarreeya calan.
MARWADEENA : “Waan ku salaamay, wiilkayga qaaliga ah ee Qalbigayga Nadiifsan: Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. ”
“Maanta waxaan la imid hal milyan oo ruux oo laga sii daayay Albaabada Purgatory , kuwaas oo deyn kugu leh, wiilkayga aan jeclahay.”
WILLIAM : Dhammaantood way jilba joogsadaan waxayna u mahad naqayaan Ilaaha Saddexmidnimada ah iyo Uur -ku -jirta aan nadiif ahayn: “Adiguna, Walaalkayaga qaaliga ah, oo na badbaadiyey Sannadka Raxmadda Eebbe.”
Marwadayada ayaa ila soo hadasha oo leh:
MARWADEENA : “Waxaan rabaa inaad hadda is diyaariso, maxaa yeelay waxaan ku geynayaa Purgatory.”
WILLIAM : Malaa’igta Albaabada Purgatory ayaa fura.
MARWADEENA : “Wiilkaygii aan jeclaa, fiiri nafahan sugaya gelitaanka Jannada.”
WILLIAM : Waxaa jira balaayiin ruux oo duceysanaya iyagoo filanaya. Hooyo Maryan waxay iga codsatay inaan ku dul sameeyo Calaamadda iskutallaabta, taasna waan sameeyay. +
MARWADEENA : “10,000 ayaa galaya Jannada maanta. Dhammaantood waa kuwa adiga ku rumaysta, wiilkaygiiyow. Waxay galayaan Jannada saacad gudaheed. Aan ku noqonno meeshii aan joogay, Wiilkaygiiyow.
“Maanta waa maalin sharaf leh, Ilmahayga, maxaa yeelay nafo badan oo kale ayaa Jannada geli doona oo nafna laguma xukumi doono Maalinta Iidda Weyn.”
“Ilmahayga iyo carruurtayda, maanta waxaan u dabbaaldegeynaa Guushaydii Jannada. Sidoo kale waxaan ka codsanayaa dhammaan Carruurteena inay ka fikiraan waqtiga adiguna, aad geli doonto Jannada, maxaa yeelay tani waa yoolka aan doonayo in dhammaan Carruurteennu galaan, laakiin waa inaan u ducaynnaa nafta oo dhan, maadaama cadowgu aad ugu xooggan yahay markan sababta oo ah wuxuu ogyahay in wakhtigiisu dhammaan doono, aad u yar. U soo duceeya, carruur macaan, Jaadkii Naxariista Eebbe adiga iyo carruurta dunida. ”
“ New South Wales ee Australia waxay gashay xiritaan guud sababtuna tahay Faafida , laakiin waa tallaabo khaldan, maxaa yeelay waxay u horseedi doontaa dadka New South Wales khilaaf weyn. Mas’uuliyiintu waxay arrinka ku eegayaan cabsi aad u weyn, laakiin kuwa gacanta ku hayaa aad bay u faraxsan yihiin, maxaa yeelay tani waxay welwel weyn ku abuuri doontaa carruurtayda. U soo ducee kuwa mas’uulka ah, maxaa yeelay waxay heli doonaan wax badan oo ay ka jawaabaan. Carruurtaydii, Faafidaani ma aha mid aad u daran sidaad adigu u samaysay. Salaaddu waxay xallin doontaa dhammaan dhibaatooyinka ”
“Carruurtayda aan jeclahay, adduunku mugdi buu sii galayaa. Dadka Bariga Dhexe ayaa ku ooman. Xaaladda, iyada oo rajeyneysa in Ameerika ay soo laaban doonto si ay uga fogaato tallaabada Taliban . Laakiin, carruur macaan, tani waa in la ilaaliyo qaab -dhismeedka Ameerika, maxaa yeelay iyada oo ciidamada Mareykanka laga fogeeyo guriga, Mareykanku wuxuu ku yaraan doonaa guriga marka dalalku weeraraan ciidda Mareykanka. ”
“U soo duceeya, Carruurtayda Ameerika , sababtoo ah masiibooyin ayaa iman doona, gaar ahaan Gobolka California. Qaar badan oo ka mid ah Gobollada ayaa la silci doona, maxaa yeelay aadanuhu weli ma dhegeystaan ​​Wicitaankeenna si aan u tukado oo aan u magdhawno. U soo duceeya Ingiriiska , maxaa yeelay tijaabooyin waaweyn ayaa u imanaya qarankan. ”
“U soo duceeya Faransiiska , maxaa yeelay waqti dheer ma jiri doonto markii ummaddan la hareerayn doono. U soo ducee Boqortooyada Faransiiska , maxaa yeelay waqtigiisu waa dhow yahay inuu yimaado si uu u badbaadiyo dadka Faransiiska; oo u duceeya Peter II, maxaa yeelay, yeedhidiisu waxay dhowaan iman doontaa adduunka. ”
“Maalintan Ciidda Weyn waxaan siinayaa dhammaan nafsadda doonista Quduuska Quduuska ah, si ay uga caawiso inay gaaraan kaamilnimo iyo quduusnimo. Adiga, wiilkayga quduuska ah, wuxuu heli doonaa Malaa’igta iyo saddexda Quduusiinta Quduuska ah, si uu kaaga caawiyo dacwaddaada xagga dhammaystirka Papacy -kaaga. ”
“Waxaan kuugu duceynayaa adiga iyo naf kasta oo wanaagsan, inaad raacdo waddada u horseedda Boqortooyada Abuuraha. + Waan kuugu duceynayaa: Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. ”
WILLIAM : Marwadayadu hadda waxay ku soo laabanaysaa Laanqayrta Cad iyada oo ay la jirto Saint Michael iyo malaa’igtayda Mas’uulka ah ayaa hadhay.
MARKAYGA : “Waan ku jeclahay, wiilkayga barakaysan, William: Magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aamiin. ”
This entry was posted in Soomaali and tagged Petrus Romanus. Bookmark the permalink.